The musiyano pakati wokurarama chikwereti uye yakavamba kubhadhara
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ The musiyano pakati wokurarama chikwereti uye yakavamba kubhadhara
The musiyano pakati wokurarama chikwereti uye yakavamba anogona kuwanikwa mashoko kuziva kuti pamwedzi kubhadhara. Wokurarama chikwereti inzira kuti achaitira kumisa kugara mari kubhadhara pamwedzi panguva kadhi chibvumirano, asi Yakabudiswa ndiyo nzira ndicharipira mumwe nguva akaisa nomumwe panguva kutengwa.
wokurarama chikwereti uye wokurarama zvikwereti, uye akaisa rendi nenguva dzinoreva kadhi kondirakiti. Shandisa 20 apo mukati Yen zvishoma kubhadhara pamwedzi 5,000 Yen, mezviruva, akadai 10,000 Yen kana kushandiswa huwandu akaenzana kana vanopfuura mamiriyoni 20 Yen kwakajairika. Muchiitiko chino, hazvina haachinji muna 5000 Yen zvishoma muripo pamwedzi nokushandisa mari. Uyezve, kana shoma muripo kana kupfuura kadhi kambani iri asarudza, unogona kuisa mari yavo pachavo.
muna wokurarama chikwereti, asati kuripwa ose kunotenga kana anogona kuiswa munzvimbo wokurarama zvikwereti, uyewo kana unogona kuisa kuti wokurarama chikwereti norunhare kana musha Peji kadhi kambani pashure kunozvitenga. Uyezve, unogona kutaridzwa nzira mubhadharo kune wokurarama mbiri panguva ndapa kuchitoro. Pane kadhi akazvitsaurira ribonucleic vo, achashandisa zvose kadhi iri kwaita wokurarama chikwereti.
Yakabudiswa uye hurongwa kuti ndicharipira rakakamurwa nhamba achida user. Kuripwa pamwedzi kunosiyana-siyana nokushandisa mari uye nhamba vachibhadhara ndiwo musiyano mukuru pakati wokurarama chikwereti. Number vachibhadhara, akasiyira mumwe nomumwe nomumwe kadhi kushandiswa. 3 nguva kana 5 nguva, 10 nguva, zvakajairika, akadai ka12. Inogona kumisa kusvika 24 nguva kana 36 nguva, kana unogona kusarudza bhonasi muripo.
In Kazhinji mumwe zvakanakira, wokurarama chikwereti yakaiswa kuti mubereko pane runogonesa Yakabudiswa. Muzviitiko zvakawanda, pamwe 18% mubereko kubva 15% muna wokurarama chikwereti, mune Yakabudiswa zvazova 15% kubva 12%. In wokurarama chikwereti ane pamwedzi kubhadhara kugara, nokuti zvakafanana mari zvisinei zvikuru sei kunotenga, weimba rakadaro pfungwa Panoti kuti ushamwari mubhadharo nzira. Pose
achachinja ari Yakabudiswa kutenga nhumbi, kuti mari kubhadhara acharamba kuwedzera. Kana wokurarama chikwereti kuramba kunotenga, asi pane nguva dzose kumagumo kana vakarasika kana vava nyaya, Yakabudiswa, Ukuwo, nokuti nhamba wakaisirwa pane mukana kuti kuvakwa muripo zviri nyore kunzwisisa. Naizvozvo, wokurarama chikwereti kana murombo mari utariri, vanhu vari kana uchida tsonyera yakawanda sezvingabvira kuripwa mutoro remwedzi yave kutarisana.
Uyezve, Yakabudiswa kunyange sezvaunoedza kushandura muripo nzira kubva zvinotevera, zvakaoma kuchinja bedzi hapana chinokosha ezvinhu, wokurarama chikwereti kunobvira prepayment. Uyu mukana mahombe wokurarama chikwereti. Somuenzaniso, kana ukatenga 100,000 Yen nhumbi, siya nguva yokuva wokurarama zvikwereti, kana mari yakarongwa akadai zvinotevera mwedzi inogona kugadzirwa, unogona chichapedziswa pakarepo mubhadharo nemari.
kuti mari, unogona kucheka kuripwa mubereko. Prepayment kune Yakabudiswa hakusi zvisingabviri asi, pashure pokunge yakananga kuonana runhare, etc. kuti kadhi kambani, pangangova kuti mhosva ane administrative pamusoro mhindu, akadai mangwanani abhadhare mubereko yoga. Wokurarama mbiri kunzwisisa sei akunoita rakanaka, unogona kushandisa akadai zviri nyore chaizvo kuenda zvakanaka inobhadharwa apo kushandisa prepayment. Somuenzaniso, kana ukatenga 100,000 Yen nhumbi, siya nguva yokuva wokurarama zvikwereti, kana mari yakarongwa akadai zvinotevera mwedzi inogona kugadzirwa, unogona chichapedziswa pakarepo mubhadharo nemari.
kuti mari, unogona kucheka kuripwa mubereko. Prepayment kune Yakabudiswa hakusi zvisingabviri asi, pashure pokunge yakananga kuonana runhare, etc. kuti kadhi kambani, pangangova kuti mhosva ane administrative pamusoro mhindu, akadai mangwanani abhadhare mubereko yoga. Wokurarama mbiri kunzwisisa sei akunoita rakanaka, unogona kushandisa akadai zviri nyore chaizvo kuenda zvakanaka inobhadharwa apo kushandisa prepayment.